Abaaraha dalka ku dhuftay oo meel halis ah maraya | KEYDMEDIA ENGLISH
Abaaraha dalka ku dhuftay oo meel halis ah maraya
Jawaab bani'aadminimo oo rasmi ah ayeysan weli helin xaaladdaha abaaraha ku dhuftay inta badan gayiga Soomaaliya, iyadoo dhimashada xoolaha iyo dadkuna ay sii socdaan.
GEDO, Sooomaaliya- Walaaaca bani'aadminimo ee ka taagan gudaha dalka, ayaanan weli helin taageeradii loo baahnaa in looga jawaabo, welina waxaa kordhaya dhimashada xoolaha iyo dadka.
Abaarta oo ku fiday dhamaan dalka, ayaa waxaa ugu daran tan ka taagan koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan deggaannada uu ka arrimiyo maamulka Jubaland.
Wararku waxa ay sheegayaan, in saacidhii la soo dhaafay ay gobolka Gedo ku dhinteen neefaf lagu qiyaasay 50, kuwaasoo u badan lo', halka ay jiraan tiro arri ah oo ay abaartu galaafatay.
Qeylo dhaanta ka soo yeereysa, dadka ku nool deggaannadaasi, ayaa indhaha laga daawanayaa, iyagoo ilaa xilligan aanan helin gurmad dhab ah oo wax ka tari kara, waayaha adag ee ay abaartu dhaxalsiisay.
Maamulka Jubaland, ayaa isaga qudhiisa ka seexday, u kaalmeynta dadka tabaaleysan, lamana ogga meel uu mariyey lacag loo qorsheeyey in looga jawaabo abaarta deggaannadaas ka jirta, taas oo ku dhacday gacanta hoggaanka maamulkaas.
Abaaraha Soomaaliya ayaa ah kuwa ka dhashay roobabkii gu'a ee sanadkan da'ay oo yaraa, iyo kuwii deyrta oo iyana aan badneyn, waxana taas ay keentay wal walka maanta hareeyey bulshada Soomaaliyeed oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraleey.